Bishaaro: – Shuruudaha Ardayga Raba inuu Online (Internet) Wax ku barto, Kana mid noqdo Ardayda Online ka. | Sahalsoftware Saaxiib Joogta ah ka dhigo: Gacmo Wada Jir Bay Wax Ku Qabtaan, Si Waxbarashadan Bilaashka ah aan u sii wadi karno, Fadlan nagu caawi inaan Online ahaano, Hal doolar, 10 Doolar, 100 Doolar iyo IWM, ku dir: ZAAD Merchant : 421880, Ama AMAL BANK noogu soo dir akoonkan: 1011696150
Bishaaro: – Shuruudaha Ardayga Raba inuu Online (Internet) Wax ku barto, Kana mid noqdo Ardayda Online ka.
Bishaaro: – Shuruudaha Ardayga Raba inuu Online (Internet) Wax ku barto:
Waa inuu haystaa Computer (uu u yaalaa goobta shaqada ama xaafadiisa).
Waa inuu haystaa Internet.
Waa inuu Magaciisa oo saddexan, Sawir kur ah iyo Telefoonkiisa ku soo diraa cinwaankan Support@sahalsoftware.com , si bilkasta laguugu soo diro Kooras cusub.
Waa inuu Bilkasta bixiyaa 15 doolar kuna diraa ZAAD Marchent: 421880 ama soo dhigaa BANK AMAL Akoonka Nambarkiisu yahay: 1011696150
Waa inuu diyaar u yahay Bilkasta 1 deeda inuu imtixaan galo, lagu qiimeynayo waxa uu bartay bishaas.
Waa inuu diyaar u yahay inuu la tartamo ardayda Xarumaha sida joogtada ah wax uga barta.
Haddii uu shahaado rabo waa in uu imtixaanka Shahaadiga yimaada Xarunta ugu dhow Ee Sahalsoftware.
Wixii intaas dheer waxaad la xidhiidhi kartaa:
FB Live: Sahalsoftware Cinwaanka Ardayda – – Riix Halkan